Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseBelgian I-Michy Batshuayi Childhood Story Plus Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesiteketiso "Batsman". Indaba yethu ye-Michy Batshuayi Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti egcwele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sokuzalwa kuze kube manje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, isizinda somndeni, ukuphila komshado, kanye nezinye izinto eziningi ezingekho (okungaziwa) ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi uyakwazi ukukhipha imigomo emangalisayo kodwa abambalwa abheka i-Bio kaMic Batshuayi eyithandeka kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
I-Michy Batshuayi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Ukuphila Kwangaphambili Nomkhaya
Ukuqala, UMichy Batshuayi Atunga wazalwa ngo-2nd ka-Okthoba 1993 eBrussels, eBelgium. Wazalwa nonina, uViviane Leya Iseka noyise, uPino Batshuayi. Bobabili abazali baseNtshonalanga ye-Afrika futhi baphendukela emuva eDemocratic Republic of Congo. Bathuthela eBelguim befuna amadlelo aluhlaza futhi banakekela izingane zabo kodwa zingakazalwa.
Njengoba ekhula eBrussels, u-Young Batshuayi wayesekelwa abazali bakhe abathanda imidlalo abamkhuthaza yena nomfowabo Aaron Leya Iseka (futhi nomdlali webhola lezinyawo) ukuthuthukisa nokwenza imidlalo abayithandayo.
Ukwesekwa kwabo kwakuthuthukiswa ikakhulukazi lokuthi uBathshuayi wabonisa ukuqina kwebhola elingenakukwenza nje ukuthi avele phakathi kwontanga yakhe kodwa waxoshwa kumfowabo omncane owayesekhetha futhi wenza isithakazelo ebhola.
Akubanga nje isikhathi eside ukuthi abazali bakaBatshuayi bazinikezele ekudleni kwakhe kwebhola ngokumbhalisa esikoleni esisha, uRFC Evere, owokuqala phakathi kweqembu lezingane ezine lapho eqala khona umsebenzi wakhe.
I-Michy Batshuayi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Umsebenzi we-Buildup
Umkhuba webhola obala uBatshuayi owaziwa naye phakathi nezinkampani zakhe zentsha yimizamo yakhe yokwenza isikhathi eside nebhola ngaphandle kokudlula, isici esenza abadlali beqembu lakhe bambheka njengobugovu.
Noma kunjalo, wathola umusa ngama-scouts avela kwamanye amakilabhu abone ngaphesheya kokubona kwakhe ubugovu. Okuphawulekayo phakathi komsebenzi wakhe osemusha kwaba ukuthuthela e-Anderlecht intsha yeqembu e-2007 lapho edlala khona ekusebenziseni imigomo ephambili kanye nokudilizwa.
Ifomu lakhe eliphezulu alizange libonwe yiqembu eliphikisanayo i-Standard Liège elivikele amasevisi akhe ku-2008. U-Batshuayi udwebe i-niche yakhe eqenjini ngemidlalo yakhe emangalisayo futhi wakhuthazwa eqenjini eliphakeme ngesikhathi eneminyaka engu-18.
I-Michy Batshuayi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Ukuphakama Ekudumeni
UBatshuayi akayena owodwa ozolahlekelwa inqubekela phambili emsebenzini ayewuthandayo. Ifomu lakhe eligcinwe phezulu limbonile ukuthi lifaka imigomo ye-21 phakathi nenkathi ye-2013 / 2014 ye-Standard Liège. I-feat phakathi kwabanye abaningi yenza ukuthi iphumelele i-Ebony Shoe Award enikezwa ngokubheka abadlali abakhulu be-African best in the group of first division teams.
UBathshuayi waqhubeka nokusebenza kwakhe e-Marseille, iqembu leFrance ayesayine ku-2014. KwakuseMarseille ukuthi ifomu lakhe lokudlala imigomo lithinte isithakazelo samaqembu aphezulu angamaNgisi ahlanganisa i-Chelsea FC neWestham. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
I-Michy Batshuayi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Ukuphila Ubudlelwano
I-Batshuayi ingomunye wabadlali abadlali abathandekayo bebhola lezinyawo ezithandayo ngokuphila kwabo ubuhlobo. Lokhu kuye kwagcina wonke umuntu ecabangela ukuthi ubani oneminyaka engu-29 ubudala obheka kahle ongathandana naye angaba naye ocansini okwamanje.
Akekho owesifazane owake wabona naye emcimbini noma ngisho nokuphuma. Nakuba abaningi bakholelwa ukuthi ulungile ekugcineni impilo yakhe yangasese ngasese, abanye bakholelwa ukuthi kuyinto nje nje yesikhathi ngaphambi kokuba adalule indodakazi yakhe noma intombi yakhe. Qinisekisa ukuthi, sizohlinzeka ngezibuyekezo zentuthuko kulokho okubhekayo njengoba kwenzeka.
I-Michy Batshuayi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Ukukhishwa ngezilinganiso ze-FIFA
UMikhy uphakathi kwabadlali abakhathalela ngempela ukulinganisa kwakhe ku-EA Sports 'umdlalo webhola webhola elidumile kakhulu. Bukela ukusabela kwakhe ekukhululweni kwe-2018 FIFA ngezansi;
I-Michy Batshuayi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Kubonakala kungalungile ukuveza
Ngesikhathi uBatshuayi e-Chelsea, wangena ngaphansi komlilo osindayo ngemuva kokubanjwa komdlalo wokubamba iqhaza. Alvaro Morata ngokulahlekelwa inhlawulo. Lesi sigameko senzeke ngesikhathi kushaya ukunqoba kwe-Chelsea ku-Arenal ekupheleni kwesihlangu somphakathi we-2017. I-Batshuayi ishintshwe nguMorata ngesikhathi seminithi ye-74th yomdlalo ngokungaphumeleli.
Lo mdlalo uvinjelwe ngokudweba kwe-1-1, ushiya izinhlawulo ukuze unqume umqobi. U-Alvaro Morata kanye naye Thibaut Courtois Izijeziso ezilahlekile zikhahlele ukuthi i-Arsenal iwine umdlalo. Yini eyenza abalandeli bathukuthele lapho kubonakala khona umdwebo wokukhombisa uBatshuayi ehleka ngemuva kukaMorata owabonakala ehlushwa ukulahleka.
Kodwa-ke, uBatshuayi waya ku-Twitter ngezikhathi ezithile ukulungisa lokho akuthatha njengombono oyiphutha ngokuqaphela ukuthi:
"Ngabe abanye abantu bakholelwa ukuthi ngangihleka lapho ngidlala nabo kanye / noma silahlekelwa? Uxolo ukudumazeka kodwa ngangingekho "
I-Michy Batshuayi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Uthando ngamahlaya
I-Batshuayi ine-penchant yokubuka nokulandela uchungechunge lwe-cartoon. Umsebenzi owodwa wemisebenzi yakhe yokungcebeleka unemiphumela emibi ngaphezu kwezokuzijabulisa njengoba kuveza umqondo wakhe wefashini. Ephawulekayo phakathi kwezinhlamvu zakhe ezizithandayo ze-cartoon yi-Sponge Bob futhi akakaze abonakale enesisindo se-Sponge Bob kathathu.
Ngaphezu kwalokho, wayevele egqoke ibhokisi elingaphansi kwesitokisi. Umbhokisi wezinhlamvu (ofanekiselwe ngezansi ngaphansi kwe-shorts ebonakalayo) ubonisa uhlamvu olwandle olujulile ngaphansi kwekithi lakhe. Ngempela uthando lwakhe nge-cartoon alukwazi ukulinganiselwa.
I-Michy Batshuayi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-I-Big Kid enhliziyweni
UBatshuayi ungomunye ongazange abonakale enza iminyaka yakhe njengoba kuboniswa yiqoqo lakhe lamathoyizi. I-25 oneminyaka engu-50 ubudala ineqoqo elikhulu lamathoyizi alichaza njengemyuziyamu yakhe siqu. "Imyuziyamu yomuntu siqu" ibonisa ikhabhinethi enkulu egcwele ingilazi.
Akuyona nje amathoyizi amancane, uBatshuayi ubonakala ethola ithoyizi elikhulu elibonakala lifana nomnyaka wakhe. Isifanekiso sayo esiphelele esivela ku-cartoon ethandwayo i-Dragon Ball Z.
I-Michy Batshuayi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Izizathu Ezibhekene Nesidlaliso
Ngenxa yothando lwakhe lwabahlaziyi, uBatshuayi wanikezwa isiteketiso esithi 'Batsman', umlingiswa ayithandayo futhi uyamchaza. Umlingisi weBatman uthathwa njengomuntu ovela ebumnyameni ukwenza okungacabangi.
I-Batshuayi ivela ebhentshini futhi isenza imilingo yokukhiqiza imigomo. Ekhuluma ngamagoli, amaqhinga kaMgqibelo weMichu's FIFA 2018 World Cup awamhlupha njengoba ebese ebona ibhola edutshulwa emaphoyiseni ngemuva kokubuya ebusweni bakhe.
I-Michy Batshuayi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Izindaba zobuntu
UMichy Batshuayi nguye othanda lokho akwenzayo futhi uveza ukukhululeka kwamahlaya ngisho nalapho izinto zingahambi ngendlela ahlela ngayo. Noma kunjalo, usebenza kanzima futhi uzama konke okusemandleni akhe ukuze enze impumelelo yakhe ibonakale ingasebenzi.
Ngaphezu kwalokho, uhlala enenhlalakahle, unomqondo wokukhulumisana futhi uzama okungcono kakhulu ukugwema izingxabano.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Michy Batshuayi Childhood Story kanye namaqiniso angama-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.
Usuku olushintshiwe: Meyi 15, 2019